कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो ? थाहा पाउनुहोस !
विवाह पश्चात साथीभाई आफन्तबाट सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न हो, बच्चा कहिले हुन्छ रु के छ फेमिली प्लानिङ रु तर कसैले सोधेको प्रश्नको सवाफ दिन भन्दा पनि आफ्नो योजना अनुसार शिशुलाई जन्मदिने तयारमिा जुटिहेका हुन्छन, अहिलेका दम्पनी । आफ्नो आर्थिक अवस्था, बच्चाको लालनपालनका लागि पर्न सक्ने आवश्यकता लगात धेरै धेरै कुराहरुको सु्निश्चितता गरेर अनि कहिले बच्चा पाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्छन अहिलेका विवाहित जोडी । यद्यपि धेरैको हकमा यो लागु नहुन पनि सक्छ । कतिलाई त कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ रु वा कसरी गर्भ रहन्छ भन्ने कुरापनि थाहा नभएको हुन सक्छ । तपाईका लागि आजको यो समग्री उपयुक्त हुनेछ ।
गर्भ कसरी रहन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सजिलो छ । जब पुरुष प्रजनन कोष ‘शुक्रकीट’ को महिलाको गर्भाशयमा अवस्थित अण्डसँग मेल भएर त्यसलाई फर्टिलाइज गर्छ तब मात्र कुनै पनि महिला गर्भवती हुन्छिन् । यसका लागि कतिपटक सम्पर्क गर्ने भन्ने विषय पनि आउला केही अध्ययनहरुले आफ्नो प्रतिवेदनमा केही तलमाथि तथ्याङ्क राखेको पाइन्छ । एउटा पेरेन्टिङ वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार दम्पतीलाई औसतमा ७८ पटक सेक्स गर्दा सफलता हात लागेको पाइएको छ । यसको मतलब यो क्रम औसत छ महिना चलेको थियो भने उनीहरूले एक महिनामा औसत १३ पटक सेक्स गरेका थिए । जहाँ १ हजार १ सय ९४ दम्पतिमाथि अध्ययन गरेको थियो ।
गर्भधारणका लागि कुन आसन राम्रो ?
कतिपय मानिसमा के विश्वास छ भने गर्भधारण आसनमा पनि निर्भर हुन्छ । यसका लागि लगभग तीन चौथाइ मानिस मिसनरी पोजिसन ९महिला तल र पुरुष माथि सुतेर गरिने यौन आसन० लाई उपयुक्त माने भने ३६ प्रतिशत जोडीले डगी स्टाइल पछ्याए ।
गर्भधारणका लागि उपयुक्त समय
विशेषज्ञहरूका अनुसार महिनावारी ९डिम्ब निष्कासनको समय० थाहा पाउनु र डिम्ब निष्कासनको पाँच दिनअघि तथा त्यसै दिन सेक्स गर्दा गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ ।
डिम्ब निष्कासनले कुनै पनि महिलाको महिनावारीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो त्यही प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत परिपक्व डिम्ब डिम्बाशयबाट निस्किएर फर्टिलाइज हुनका लागि तयार रहन्छ ।
डिम्बको आयु ?
डिम्ब निष्कासन प्रक्रियामा निस्किएको डिम्ब १२ देखि २४ घन्टासम्म फर्टिजाइज हुनसक्छ । सेक्सका क्रममा प्रवेश गरेको पुरुष शुक्रकीट महिला प्रजनन प्रणालीमा ५ दिनसम्मपनि रहन सक्छ ।
गर्भ रहने बढी सम्भावना तब रहन्छ जव डिम्ब निष्कासनका बेला शुक्रकीट फेलोपियन ट्युबमा पहिल्यैदेखि मौजुद रहेको हुन्छ ।
कहिले हुन्छ डिम्ब निष्कासन ?
महिनावारी नियमित छ भने डिम्ब निष्कासन सामान्यतः अर्को महिनावारी सुरु हुनुभन्दा १४ दिन पहिल्यै हुन्छ । त्यसैगरी अधिकांश महिलामा डिम्ब निष्कासन महिनावारीको मध्यविन्दुभन्दा ४ दिन पहिले वा पछि हुनसक्छ ।
धेरै महिलामा महिनावारी चक्र ठीक २८ दिनमै हुँदैन । यस्तो छ भने महिलाहरूले महिनावारीको क्यालेन्डर बनाएर महिनावारी चक्रको लम्बाइ एवं मध्यविन्दुको अनुमान लगाउन सक्छन् ।
महिनावारी चक्रको क्यालेन्डरका अतिरिक्त डिम्ब निष्कासन समय अनुमान लगाउने अन्य तरिका पनि छन् । तीमध्ये एउटा भेजाइनल सेक्रेसनमा ध्यान दिनु पनि हो । डिम्ब निष्कासनअघि भेजाइनल सेक्रेसन सफा, ओसिलो एवं लचिलो हुन्छ ।
पछि यसो हुन्छ
डिम्ब निष्कासनपछि तुरुन्तै सर्वाइकल म्युकस कम हुन्छ र यो बाक्लो, मधुरो तथा लगभग अदृश्यजस्तै हुनपुग्छ ।
शरीरको बेसिक तापक्रम (आरामको अवस्थामा शरीरको तापक्रम) मा ध्यान दिएर पनि डिम्ब निष्कासन समयको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि हरेक बिहान ओछ्यान छाड्नुअघि शरीरको तापक्रम जाँच्न सकिन्छ । तापक्रममा वृद्धि हुनुभन्दा २९३ दिनअघि कुनै पनि महिला गर्भवती हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जसरी बजारमा प्रेगनेन्सी टेस्ट किट बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध छ त्यसरी नै ओभुलेसन ९डिम्ब निष्कासन० डिटेक्सन टेस्ट किट पनि सहजै पाइन्छ । यसबाट डिम्ब निष्कासन भएनभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सामान्यभन्दा बढी तथा कम तौल भएका महलिाहरूमा ओभुलेसन डिसअर्डरको खतरा बढी हुन्छ । तसर्थ गर्भधारण गर्न चाहने महिलाले तौल नियन्त्रण राख्नु आवश्यक छ ।